အသစ်ထွက်လာတဲ့ OPPO Reno4Pro မှာ ဘာတွေထူးခြားသွားမလဲ ? — Anycall Mobile
အသစ်ထွက်လာတဲ့ OPPO Reno4Pro မှာ ဘာတွေထူးခြားသွားမလဲ ?
By liam August 1, 20202Mins Read
အရင်လလောက်တုန်းက OPPO ဟာ သူ့တို့ရဲ့ Reno4Series အသစ်ကို တရုတ်မှာမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး အခုတော့ Global ဈေးကွက်ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။
အရင်က တရုတ်မှာထုတ်ခဲ့တဲ့ Reno3Series နဲ့ Global အတွက်ထုတ်ထားတဲ့ Reno3Series တို့မတူသလို အခု Reno4Pro China နဲ့ Reno4Pro တို့ဟာလည်း မတူတဲ့ Specs တွေနဲ့ထွက်ရှိလာတာပါ။
OPPO Reno4Pro မှာထူထူးခြားခြားပါဝင်လားတဲ့ Features တွေကတော့ 90Hz Super AMOLED Display နဲ့ 65W SuperVOOC 2.0 Fast Charging တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အရင်က Reno3Pro နဲ့ယှဉ်ရင် Reno4Pro မှာဘာတွေများကွားသွားမလဲ??
ဖုန်းမှာသိသိသာသာထင်ရှားလာတဲ့အချက်ကတော့ 3D Curved Display ကိုသုံးပေးလာတာပါပဲ။ 3D Display ကြောင့် ဖုန်းရဲ့ Bezels တွေကတော်တော်လေးပါးသွားပြီး Screen-to-body မှာလည်း ၉၂ % အထိရှိပြီး ဖုန်းရဲ့အလေးချိန်ဟာ 161g ပဲရှိတဲ့အတွက် ၂၀၂၀ ထွက်ဖုန်းတွေထဲမှာ အပေါ့ဆုံးဖုန်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ကျောဘက်မှာတော့ ကင်မရာလေးလုံးကိုဖုန်းရဲ့ ဘယ်ဘက်ထောင့်မှာ ထောင်လိုက်တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
ဖုန်းရဲ့ပါဝါခလုတ်ကတော့ ဖုန်းရဲ့ ညာဘက်မှာတပ်ဆင်ထားတာကိုတွေ့ရပြီး Volume ခလုတ်ကိုတော့ဖုန်း ဘယ်ဘက်မှာတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ဖုန်းအောက်ခြေမှာတော့ USB-Type C Port နဲ့ Speaker ပေါက်ကိုတွေ့ရမှာပါ။ စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုကတော့ နားကြပ်ပေါက်ပါမလာတော့တာပါပဲ…
OPPO Reno4 Pro မှာ 1,080 x 2,400 px Resolution ရှိတဲ့ 6.5” E3 Super AMOLED Display ကိုသုံးပေးထားပါတယ်။ ဒီ Display မှာ 90Hz Refresh Rate 180Hz Touch Sampling Rate တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ နောက်ထပ် Display ရဲ့ Brightness ဟာ 1,100 nits အထိရှိတဲ့ အတွက်တော်တော်လေး တောက်တဲ့ Brightness ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Super AMOLED Display ကြောင့် Under-Display Fingerprnt လည်းပါဝင်လာပါတယ်။
ဖုန်းရဲ့ Quad Camera ထဲမှာ 48MP Main Camera, IMX586, 1/2″, F/1.7 ၊ 8MP Ultra-Wide Angle Camera, 1/4″, F/2.2 ၊ 2MP Macro Camera, 1/5″, F/2.4 ၊ 2MP Mono Camera, 1/5″, F/2.4 တို့ပါဝင်ထားပါတယ်။ Reno4Pro China မှာပါထားတဲ့ Telephoto Camera တော့ပါဝင်လာခြင်းမရှိပါဘူး။
Specs တွေအရ Camera ဟာပုံမှန်လောက်ပဲရှိနေပေမယ့် OPPO ဘက်က Camera ပိုကောင်းစေဖို့ Features အသစ်တွေပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီ Features တွေထဲမှာဆို Video တွေရိုက်တဲ့ အခါ ပိုပြီး Steady ဖြစ်စေဖို့ Ultra Steady Video 3.0 ၊ Monochrome AI video mode ၊ AI Color Portrait Video စတဲ့ Features တွေပါဝင်လာတာပါ။ နောက်ထပ် Ultra Night Selfie Mode, Ultra Dark Photo Mode (when lighting is lower than 1 lux), Night Flare Mode နဲ့ 108MP mode စတဲ့ Modes အစုံကိုလည်းထည့်ပေးထားပါသေးတယ်။
Selfie အတွက်တော့ ဖုန်း Screen ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့် Punch-Hole ထဲမှာ 32MP Selfie Camera ကိုထည့်ပေးထားပါတယ်။
Performance မှာတော့ Snapdragon 720G Chipset နဲ့ အားဖြည့်ပေးထားပြီး 8GB of RAM ၊ 128GB of storage တို့နဲ့တွဲပေးထားပါတယ်။ သူ့ထက်ဈေးနည်းတဲ့ ဖုန်းတွေမှာတောင် 765G Chipset ကိုသုံးထားတာ 720G ပဲ သုံးထားပေးတာက နည်းနည်းတော့အောက်နေပါတယ်။ Reno3Pro China မှာတော့ 756G Chipset ကိုသုံးပေးထားပါတယ်။ Software အတွက် Android 10 အပေါ်အခြေခံထားတဲ့ Color OS 7.2 ကို Run ပေးထားပါတယ်။
Reno4Pro မှာပါဝင်လာတဲ့ Fast Charging ဟာဆိုရင် ဖုန်းရဲ့ အားသာချက်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ၊။ အကြောင်းကဖုန်းမှာ Super-Fast 65W SuperVOOC 2.0 ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ 4,000 mAh Battery ပါဝင်လာလို့ပါပဲ။ 4,000 mAh Battery ကို ၁၀၀ ရာခိုင်းနှုန်းအပြည့်သွင်းမယ်ဆို 36 မိနစ်ပဲကြာမယ်လို့ OPPO ကဆိုထားပါတယ်။
Reno4 Pro ရဲ့ဈေးကတော့ အန္ဒိယ ရူပီး ၃၄၉၉၀ ( မြန်မာငွေ6သိန်းခွဲဝန်းကျင်) ရှိပြီး August5ရက်နေ့မှာစတင်ရောင်းချလာမယ်လို့သိရပါတယ်။ တစ်ခြားနိုင်ငံတွေမှာရောင်းချလာမယ့်ရက်ကိုတော့ OPPO ဘက်ကဖော်ပြသွားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။
oppoReno4ProReno Series